Vulela kwi-Instagram, Fumanisa ngoku! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Vula kwi-Instagram, fumana ngoku!
NgoFebruwari 4, 2019 0 IiCententarios 2529
Iinethiwekhi zokunxibelelana zibangele ukuvuseleleka inqanaba lehlabathi. Ezi nethiwekhi njengangoku kubomi bemihla ngemihla babemi. Okoko ukusebenza kwayo kukhululekile kwaye kunomtsalane kuye kwatsa izigidi zabasebenzisi. Enye yezona zinto ziwayo ngalo mzuzu yile I-Instagram yenethiwekhi yoluntu. Le nethiwekhi yamkelweyo ijolise ekushicileleni umxholo wemultimedia njengendlela yokubonisa. Nangona kunjalo, kukho iimeko ezininzi zokuhlukunyezwa okanye ubundlobongela be-cyber abanye bakhethele abanye abasebenzisi. Nangona, njengoko i-avareji iphinda iphinde iphinde iphinde ivulwe kwi-Instagram.
I-Instagram kunye nokuhlukunyezwa
Iqonga le Instagram Ukusukela ekuqalisweni kwayo, iqinisekisile ukukhululeka kunye nokhuseleko lwabasebenzisi bayo. Yiyo loo nto, xa umsebenzisi eye wachaza umntu ongafanelekanga ukuba anqwenele ukuba angayiboni impapasho yakhe, kufuneka kwazi ukuyivimba. Oku kubandakanya uthotho lwamanyathelo alula kwaye asebenzayo anciphisa ukulandela abanye. Ngale ndlela, umfokazi akufuneki angabinakho ukubona naluphi na upapasho olubekwe ngumsebenzisi. Nangona kunjalo, esi siphumo sikwamacala amabini, oko kukuthi, umsebenzisi obhlokileyo ngekhe abenakho ukubona nantoni na iprofayile evaliweyo.
Ngalesi sixhobo, umsebenzisi unokuqinisekisa ukuba ilungelo labucala. Ngale ndlela unokuziva ukhuselekile kancinane kwaye ukhusele neenkcukacha zakho. Into yokuba abasebenzisi bakhululekile ukunqanda nabani na obenza bazive besengozini okanye belahlekile imfihlo yabo kubalulekile ukuba uyithathele ingqalelo. Ngale ndlela, kufuneka babe nako ukuphakamisa uhlobo isithintelo sokukhusela Ukuphepha ukophulwa.
Izizathu zokuvimba umntu kwi-Instagram
Izizathu zokuba omnye umsebenzisi afune ukuthintela umntu kwinethiwekhi yezentlalo yile ngokwahluka kakhulu. Zingaqala kubudlelwane obufikelele esiphelweni sendlela embi, kwanokuthintela ilungu losapho ukuba lingayazi into eyenziwe nguloo mntu. Ngapha koko, inani elikhulu labasebenzisi libhenela kule ndlela ukuphepha inyani elula yokuba Ixhoba "I-Stalk" ngomnye umsebenzisi onikezwe.
Into embi malunga nolwalamano ilele ikhefu kuyo amagama amabi. Kufuneka kusoloko kukho ukrokra okanye inzondo malunga nesibini esitshatileyo. Kukho uninzi lwe-ex 'abalawula rhoqo kwaye bahlolisise iiwebhusayithi zonxibelelwano. Oku ukuphazamiseka kwengqondo Kufuneka ikwazi ukwenza umsebenzisi ohlolwayo ukuba angakhululeki. Yiyo loo nto Instagram, endaweni yokuthuthuzelwa kwabalandeli bayo ivumela umntu ngamnye lowo thimba "hlola" ngombuzo
Isiko lentlalo lithetha ukuba abantu abancinci bathambekele ukupapasha yonke into abayenzayo kwi zokunxibelelana Kungenxa yoko le nto, ngaphambi kwezenzo ezingafuneki zibonwe ngabantu abathile, abasebenzisi baphendukela ekunqandeni okwethutyana abantu abathile. Oku kwenziwa ngenjongo yokuvula emva kwexesha umntu ochaphazelekayo kwi-Instagram. Amaxesha amaninzi, abantwana banquma ukufihla isenzo esithile sabazali babo, into Ndimsulwa njengobusuku ngaphandle, baphendukela ekusebenziseni isixhobo esimalunga nombuzo.
Hayi indlela ekukubi ngayo ukuziva ukuba bakubukele, okanye nokuba bakhangele inyathelo ngalinye. Oku kuvame ukwenzeka rhoqo kwi- amatyala okuhlukumeza, okuninzi kudidi cybernetic. Ukuthatha inyani kwinyani, abasebenzisi bagqiba ukuthintela ukubonwa okanye abantu ngokubanzi okanye bathintele umntu othile. Eli nyathelo linokubuyiselwa umva ukuze kwakhona livulwe kwi-Instagram.
Indlela yokuvula kwi-Instagram?
Ngamanye amaxesha, abasebenzisi bakwazile ngandlela zonke ukoyisa inqanaba lokungazithembi okanye baseke ubudlelwane kunye nabo babekade babaxhaphaza. Akukho sizathu singavumelekanga, kuba mntu ngamnye yindalo yeengcinga. Ngenxa yale nto, unokufuna ukuvula umntu oye wahluthwa ukujonga izithuba kwi-Instagram.
Zazise ukuba ungubani
Inyathelo lokuqala lokuvula kwi-Instagram kufuneka ukuba ungene iakhawunti yakho. Oku kufuneka kwenziwe ngokusebenzisa isicelo. Ngale nto, umntu lowo uya kucelwa idatha yokuqalisa Iseshoni ekufuneka ibe ligama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba ungene kwiakhawunti yakho, umsebenzisi kufuneka akwazi ukuyijonga iphepha lasekhaya womnatha. Ukuba umnqweno womsebenzisi kukuvula ngaphakathi Instagram Kuya kufuneka ucinezele kwi-icon ye-humanoid. Le icon iya kuba sekupheleni kunene ukusuka kwibha esezantsi ebonwa kwiscreen.
Xa sele ifunyenwe kwisibonakaliso seprofayile, umsebenzisi uya kucelwa ukuba abhekise ku ukhetho yeqonga. Ukwenza oku, umntu kufuneka acofe ku amanqaku amathathu ii-verticals ziya kufunyanwa kwikona ephezulu yesikrini.
Xa ungena kwimenyu yokukhetha, kufuneka uyenze Skrolela ezantsi, eya kufana nokulayita ezantsi. Ngale ndlela cinezela ukhetho Abasebenzisi abavaliweyo ". Ke, uluhlu lweeakhawunti ozithinteleyo kufuneka luvele phambi komntu. Kwaye ukuvula i-Instagram kuya kufuneka ukhethe enye yazo.
Nje ukuba ukhethe umntu oza kukuvula kwi-Instagram kufuneka Ngenisa iprofayile yakho. Ukuze ukwazi ukucinezela "Vula" isithuba. Ke, ujongano kufuneka lucele isiqinisekiso sokuvula apho umsebenzisi kufuneka qinisekisa. Ngale ndlela, umsebenzisi uya kuba ufumene impumelelo ngokuvula kwi-Instagram.
Siyakuxelela indlela yokukhuphela ngqo ku-Instagram.
1 I-Instagram kunye nokuhlukunyezwa
2 Izizathu zokuvimba umntu kwi-Instagram
2.1 Abafana abaphambili
2.2 Imfihlo eziphezulu
3 Indlela yokuvula kwi-Instagram?
3.1 Zazise ukuba ungubani
3.4 Abasebenzisi abavaliweyo
NgoFebruwari 3, 2019
Funda ngokulula indlela yokunyusa uphawu kwi-Instagram
NgoFebruwari 5, 2019
Dibana namaqhinga asisiseko e-5 ekwandiseni utyelelo kwiBhlog yakho